Diyaarad (drone) ah oo ku degtay xabsi Faransiis ah oo u tuurtay xidhmo maxaabiista kujirta - Horn Future
PARIS (Horn Future)-Warbaahinta Faransiiska ayaa maanta oo Arbaca ah soo warisay in diyaarad kuwa loo yaqaano (drone) ka ee aanan duuliyaha lahayn oo siday xidhmo la tuhunsan yahay inay ku degtay meel u dhow barxadda xayn-daabka xabsi ku yaala koonfur bari ee dalka.
Sida laga soo xigtay wargayska Le Figaro, diyaarad nuuca (drone) ka ah oo leh kamarad oo ay ka lulato xidho ayaa ku soo degtay meel u dhow xayn-daabka barxadda xabsiga Valence ku dhawaad goor-sheegta guduhu markay ahayd qiyaastii 3.30 p.m. subaxnimo ama (1330GMT) Salaasadii.
Wargayskan maalinlaha ah ayaa tilmaamay in “si cad loo aqoonsaday xidhmadan,” sida uu kasoo soo xigtay ilaha xog ururinta ee ka tirsan saraakiisha xabsiga.
Waxa isla markii ba”Ilaaladu si degdeg ah u sameeysay nidaamka qaylo-dhaanta,iyada oo baadhitaan lagu sameeyay maxaabiista oo dhan … laakiin aynan suuragal noqon in la helo waxyaabaha ku jiray xidhmaddan,taas oo maxaabiistu ay isla markiiba qaateen oo midba mid kale degdeg ugu tabiyay, “sida lagu yidhi war-warbaahineedkan.
Dhacdadan Salaasadii ayaa kor u qaaday welwelka kormeerayaasha xabsiga,kuwaas oo horeba u sheegay inay la dhibaatoodaan inay xakameeyaan waxyaabaha sharci darrada ah ee kusoo qulqulaya xabsiyada Faransiiska.
Waa warkan qoraalka ah lagu yidhi”Tani waa tallaabadii ugu horreeysay ee lagu soo galiyo waxyaabo badan oo halis ah,maantana waxa dhici karta inay tahay in maan-dooriye loo adeegsaday, marka xigta, waxay noqon kartaa hub,ama waxyaabaha qarxa,”.
« Der Spiegel:Waxa sabab u ah inay kacdo ( Air Berlin) sheekhyada imaarada Abu Dhabi	» Kalluunka nuuca (sardines) ku waxa uu hodan ku yahay (omega-3)